Nlekọta 1e Degree Sport - Gaa! AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ (ỤLỌ-Oge / A-STREAM // CAMPUS RUGGEVELD)
1e ọkwa sports
Bụrụ onye na-eme egwuregwu dị egwu
ụdịdị dị iche iche School > Ihe ọmụmụ anyị > Egwuregwu 1e Degree > Egwuregwu 1e Degree
Ọzụzụ Ọmụmụ Ihe + (A-ugbu a) nke Gaa! Ụlọ akwụkwọ sayensị, campus Ruggeveld
De Egwuregwu 1e Sport (A-iyi) bụ nkwadebe maka ọzụzụ ahụ Le & Sports, ndị egwuregwu anyị. Ị na-enweta agụmakwụkwọ zuru ezu nke bụ otu maka onye ọ bụla, ma a na-akwụkwa nlezianya anya maka Sport na usoro a.
Na Afọ 1e gbakwunye oge awa nke egwuregwu ma e wezụga agụmakwụkwọ nkịtị. Na Afọ 2e ị ga - enweta akwụkwọ agụmakwụkwọ sara mbara na ị makwaara alaka ụlọ ọrụ dị iche iche. Ị ga-adị njikere maka usoro ọmụmụ ndị ọzọ.
Ụlọ akwụkwọ anyị na-enye ọtụtụ ngwá ọrụ. N'ụlọ egwuregwu anyị na n'èzí ebe ị na-eme egwuregwu dị iche iche. N'akụkụ ụlọ egwuregwu ahụ, e nwere Rivierenhof na ogige ntụrụndụ n'okporo ámá Sport oasis Ukwu na-enwu na-egwu egwuregwu, ọdọ mmiri na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Rink rink dị nso n'akụkụ ogige ahụ.
Ị bụ egwuregwu
Ị bụ go-getter
Ị na-eche na jitters egwuregwu na afo? Ị bụ go-getter na onye otu egwuregwu?
Mgbe ahụ ọzụzụ a nwere ike ịbụ ihe maka gị.
Ị ghaghị inwe ahụrụ dị mma maka ọzụzụ dị iche iche ma mee ka ị gbalịsie ike ịmekwu mgbalị maka ọzụzụ ebe ị na-erughị talent ma ọ bụ mmasị.
Ị gafeela afọ 2e? Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịmalite ụkpụrụ n'ụdị ọ bụla nke ogo mmụta abụọ. Ị nwere ike ịga n'ihu na-amụ akwụkwọ na mpaghara ebe a na-eme egwuregwu Le & Sports, na ị bụ akụkụ nke anyị Ndị na-egwu egwuregwu!
Ghọta ihe ndozi ahụ!
ECHICHE ECHICHE NA MEDIA MERE
Gaa ebe a na tebụl nke Akwụkwọ 1e Egwuregwu Egwuregwu:
Afọ 1e nke na-erughị ala (37KB, .pdf)
Afọ 2e nke na-erughị ala (38KB, .pdf)